Mareykanka: Jawaab milatari ayaan ka bixin doonaa weerarkii kiimikada Suuriya | ogaden24
Mareykanka: Jawaab milatari ayaan ka bixin doonaa weerarkii kiimikada Suuriya
Apr 12, 2018 - Aragtiyood
Maraykanka ayaa sheegaya “inuu ka baaraandegayo xaalad kasta oo u furan” si uu uga jawaabceliyo weerarka la tuhunsan yahay in loo adeegsaday hubka kiimikada ah ee ka dhacay Suuriya, xilli hogaamiyayaasha galbeedka ay ka fekerayaan qaadidda tallaabooyin milateri.
Afhayeenka Aqalka Cad, Sarah Sanders ayaa weriyayaasha u sheegtay inaan go’aan laga gaarin tallaabada milateri ee la qaadayo.
Golaha ammaanka Qaran ee Maraykanka ayaa maanta ka shiraya tallaabada ay ka qaadayaan Suuriya, halka Ra’iisal wasaaraha UK, Theresa May ay isugu yeertay golaheeda wasiiradda.
Hoggamiyayaasha dalalka galbeedka ayaa u muuqda inay u diyaar garowbayaan weerarrada dhinaca hawada ah balse Ruushka ayaa sheegay inay sameyn doonan aargoosi haddii weerar lagu soo qaado xulafadooda Suuriya.
Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ,Ruushka iyo Mareykanka ayaa hor istaagay qaraar ay kala wateen, ka dib markii la isku afgaran waayay cidda baaritaanka ku samayneysa weerarka kiimikada ah ee la sheegay.
Ururka Caalamiga ah ee mamnuucidda Hubka Kiimikadda ah (OPCW) ayaa sheegay inuu dhawaan booqanayo Douma, balse ma cadda marka uu halkaa gaari doono, iyo inta ay la egtahay caddeynta uu goobta ugu tegi doono.
Shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in dadka ku waxyeeloobay weerarkan ay u badnaayeen haween iyo carruur
Magaalada ayaa haatan la baneeyey,kaddib is afgarad ka yimid Ruushka iyo mucaardka ka dagalamay magaladaas.
Ruushka ayaa sheegaya in magaalada ay la wareegeen ciidamada Suuriya, dhismayaasheedanna laga taagay calanka dowladda, walow aan la xaqiijin karin sheegashadaasi.
Sarkaal lagu magacaabo Yury Yevtushenko ayaa sheegaya inay taasi muhiim u tahay taarikhda Suuriyada iyadoo bariga Ghouta ay hadda gacanta ku hayso dowladda.
Dhanka kale Madaxweyne Bashar al-Assad oo taagero milateri ka helo Ruushka ayaa dafiray in ay dowladdiisa ka dambaysay weerarkaas.
Hayy’adda caafimaadka aduunka ayaa maalintii Arbacada ahayd dalbatay inay xaqiijiso warbixinada la shaaciyey oo ah in 70 qof ay dhinteen oo 43 ka mid ah ay la haayeen calaamadaha sunta kiimikada.
Halkuu Ruushka ka taagan yahay arrinkan?
Xubna sare oo u hadlay Ruushka ayaa sheegay in Ruushka uu ka jawaab celinayo weerar kasta oo ka yimaada Maraykanka
Arbacadii ayaa Alexander Zasypkin oo ah safiirka Moscow u fadhiya Lubnaan waxa uu sheegay in dalkiisa uu soo ridi doono gantaal kasta, uuna weerarri doono goobta laga soo riday, waa haddii ay khatar gasho noolasha ciidamada iyo shaqaalaha dalkiisa.
Madaxweyne Vladimir Putin mar uu la hadlayey safiirro dhawaan la magacaabay ayuu sheegay in uu rajeynaya in ay xaaladda haatan taagan lagu wajihi doono caqli saliim ah.